Kismaayo News » Sh. Axmed Madoobe oo gurmad u diraaya Beled Xaawo
Sh. Axmed Madoobe oo gurmad u diraaya Beled Xaawo
Kn:Magaalo xeebeedka Kismaayo waxaa caawa shir jaraa’id ku wada qabtay labada Gudoomiye ee ururrada Raas Kaambooni oo ah Sh. Axmed Madoobe iyo Ahlu Sunna, gobolka Gedo oo ah Awlibaax.
Shirka Jaraa’id oo masuuliyiinta labada urur ay si wada jir ah ooga hadlayeen dareen kooda ku aadan xaaladda ka soo cusboonaatay magaaalada Beled Xaawo, xili ay u fadhiyaan diyaarinta gogosha lagu unkaayo maamul goboleed ay yeeshaan sadexda gobol ee sii koonfureed ayaa Sh. Axmed Madoobe oo ka hadlay wuxuu shaaca ka qaaday in cutub kamid ah ciidamadiisu ay sida ugu dhaqsiinyaha badan gurmad ahaan u gaari doonaan magaalada Beled Xaawo.
“Tuulo ama magaalo kamid ah sadexda gobol kama baaqsanayno inaan ka sifayno diin bi’iska shacabka dhibaataynaya” ayuu yiri Sh. Axmed oo markaasi uu dhiniciisa fadhiyo gudoomiyaha Xarakada Ahlu Sunna ee gobolka Gedo, Awlibaax. “Kismaayo, Dhoobleey iyo Beled Xaawo waa isku mid, mana ogolaanayno meel kamid ah sadexdan gobol cid kasta oo isku dayda inay xasilooni la’aan ka abuurto” ayuu mar kale yiri.
Gudoomiyaha Ahlu Sunna ee gobolka Gedo, Awlibaax ayaa asna dhankiisa sheegay inay la dagaalamayaan Shabaabka iyo cid kasta oo isku dayda inay carqaladayso nabad ku noolaanshaha shacabka sadexda gobol, wuxuuna intaasi ku daray inay iska kaashanayaan, gacmahana iska qabsanayaan sidii looga hirgalin lahaa nabadgaliyo waarta sadexda gobol masuuliyiinta iyo ciidamada ka haatan ka hawlgalaaya.
Awlibaax oo wafti uu hor kacaayay ay soo gaareen magaalada todobaadkii tagay ayaa maanta si lama filaan ah ciidamadiisa looga baro kiciyay magaalada Beled Xaawo, inkastoo ay markii danbe weerar celis dib ugu qabsadeen.
Ciidamada Ahlu Sunna iyo kuwa Kaambooni ayaa labaduba ka madax banaan ciidamada ku hawlgala magaca dawladda, waxayna leeyihiin cudud milatari oo aan la dhayalsan karin, ilaa iyo hadana majiraan qorshayaal cad oo u diyaarsan dawladda hadeer dhalatay iyo waliba tii ka horaysay ee ku meel gaarka ahayd oo ku aadan sidii xeegana lagu xagan lahaa ilkana ku nabad gali lahaayeen.